Wararkii Ugu Dambeeyey Ee Xaaladda Barca v PSG
HomeChampions LeagueWararkii Ugu Dambeeyey Ee Xaaladda Barca v PSG
21/04/2015 Abdiwahab Ahmed
Toddobaadkii hore ayey Barcelona u safartay magaalada Paris halkaas oo ay kala soo noqotay guul ay si dhibyar ku heshay kadib markii ay ciyaar liidata kala kulantay PSG oo garoonkeeda joogtay.
Laba gool oo uu dhaliyey Suarez iyo mid uu dhaliyey Neymar ayaa Barcelona ka caawiyey inay guul aanay ku rafaadin oo 3-1 kaga badiso PSG.
PSG ayaa laga rabaa si ay ugu gudubto wareegga afarta kooxood in ay Barcelona kaga badiso ugu yaraan 3-0, taas oo marka xaqiiqada laga duulo ku adkaan doonta.
Qaab-ciyaareedka kubbad isku dhiibista ah ee Barcelona ayaa dawakhiyey ciyaartooyada PSG, kuwaas oo khadka dhexe iyo difaacaba aad uga liitay.
Yaa ka maqnaan doona kulanka caawa:
Barcelona: kooxda reer Catalonia waxay ka nabad qabtaa dhaawacyada, iyadoo uu Andres Iniesta oo kulankii hore dhaawacmayna dib ugu soo laabtay garoomada. Kaliya wax aka maqnaan doona Thomas Vermaelen oo muddo dheer dhaawac ahaa iyo Daniel Alves oo ganaax ku maqnaan doona.
PSG: Paris Saint-Germain waxa la hubaa in kabtanka Thiago Silva aanu ciyaari doonin caawa iyadoo uu maqnaanshaha ku wehelinayo Thiago Motta oo isna dhaawacan iyo waliba Aurier oo ganaax ah. Sidaas oo ay tahay, haddana PSG waa ay ka rajo fiican tahay lugtii hore iyadoo ay dib ugu soo laabteen Zlatan Ibrahimovic iyo Marco Verrati oo kulankii hore ganaax kaga maqnaa.
Dhanka kooxda martida ah caawa ee Paris Saint-Germain waxaa dhaawacyo kaga maqan kabtankooda Thiago Silva iyo xiddiga khadka dhexe Thiago Motta, halka Aurier uu ganaax ku maqan yahay. Laakiin waxaa war wanaagsan u ah in Ibrahimovic uu kooxda ku soo laabtay ka dib ganaax uu ku seegay lugtii hore.
Dib-u-daawo ciyaartii hore ee labada kooxood:
Sixiroole u dhashay dalka Ghana oo sheegay inuu sixray Cristiano Ronaldo
Barcelona Oo Soo Ban-dhigtay Sawirrada Sida Uu U Muuqan Doono Camp Nou Xilli Ballaadhin Ay Ku Sameynayso Garoonkeeda + Sawirro
09/03/2016 Samatar Mohamed
Goals and Highlights: Arsenal 2-1 Swansea City – Premier League